Lampard oo war naxdin leh ka helay kulamada caalamiga ah, kaddib markii uu dhaacmay xiddig muhiim ka ah kooxda Chelsea – Gool FM
(London) 09 Okt 2020. Kulamada caalamiga ah ayaa war xun ka soo gaaray tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard, kaddib markii uu dhaawac soo gaaray goolhaayaha reer Senegal ee Edward Mendy.
Sida laga soo xigtay warbixin ay daabacday shabakada “talkSPORT” goolhaayaha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Edward Mendy ayaa soo gaaray dhaawac inta uu ku gudi jiray tababarka xulkiisa qaranka Senegal, kaasoo ay ugu diyaar garoobayeen kulanka saaxiibtinimo ay caawa laciyaarayaan dhigooda Morocco.
Warbixinta ayaa tilmaamtay in Xiriirka Kubadda Cagta Senegal ay xaqiijiyeen in Mendy uu ku dhaawacmay bowdada midig intii lagu guda jiray tababarkii xulkiisa qaranka.
Haddii dhaawaca Edward Mendy uu noqdo mid culus oo u baahan in mudo ah inuu garoomada ka maqnaado si uu u soo kabto, tababaraha kooxda Blues ee Frank Lampard ayaa u baahnaan doona in markale uu doorto midkood Kepa Arrizabalaga iyo Willy Caballero.
Kepa ayaa ka qeyb galay kulankii xulkiisa qaranka Spain uu wajahay Portugal Arbacadii, kaasoo ku soo idlaaday barbardhac goolal la’aan ah, ciyaar xiiso badan oo ka dhacday garoonka Jose Alvalade caasimada Portugal ee Lisbon.
Roy Keane oo uga digay Solskjær inuu maro wadadii José Mourinho ee kooxda Manchester United